सावधान ! झुक्किएर पनि नखानुहोस् यी ७ किसिमका रोगीले लसुन, नत्र पुर्याउँछ यस्तो असर – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/सावधान ! झुक्किएर पनि नखानुहोस् यी ७ किसिमका रोगीले लसुन, नत्र पुर्याउँछ यस्तो असर
काठमाडौँ । लसुन भन्ने वितिकै हामीसबैलाई थाहा भएको करा हो । यसलाई हामीले स्वादको लागि परिकारमा मसलाको रुपमा प्रयोग गछौ ।लसुनले खानालाई स्वादिलो मात्रै मात्रै बनाउँदैन, शरीरलाई स्वास्थ्य राख्नपनि सहयोग गर्छ। लसुन निकै गुणकारी हुन्छ।लसुन नियमित खाँदा स्वास्थ्यमा सुधार आउने र केही खतरनाक शारीरिक समस्याबाट समेत बच्न सकिन्छ।तर लसुनको प्रयोगको यति धरै फाइदा हुदाँहुदै पनि यसले सबै मानिसलाई फाइदाजनक नभएको पनि हुन्छ ।
सबै चिजका राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष हुन्छ नै हामीले लसुनको प्रयोग गर्दा आफ्नो स्वस्थ्य अवस्थाका बारेमा ख्याल गर्नुपर्छ । आज हामी तपाइसामु लसुन खान नहुने अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौ ।
लसुन खादाँ हुने खतराको अवस्था –
१.झाडापखाला लागेको व्यक्ति
२.कलेजोको समस्या भएको व्यक्ति
तर, हेपाटाइटिस भाइरसको उपचारको लागि लसुन खानु उचित हुँदैन। किनभने, लसुनको सेवनले पेट र आन्द्रामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ, जसले हाम्रो आन्द्रामा पैदा हुने ग्यास्ट्रिक एसिडको मात्रालाई कम गर्दछ।जसको कारण हाम्रो पाचन प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्दछ। यसले बान्ता हुने, रिङ्गटा लाग्ने जस्ता लक्षणहरू निम्त्याउँदछ। त्यसैले हेपाटाइटिस हुनेहरूले लसुनको सेवन नगर्नुहोस्।
३. कम रक्तचाप भएको व्यक्ति
४.सर्जरी गर्न लागेको व्यक्ति
५.आँखा रोग भएको व्यक्ति